China silicon carbide inopenya chubhu uye kupisa exahanger Mugadziri uye mutengesi | Anteli
Sintered nesilicon Carbide Micropowder Green
Yakagadzirwazve Silicon Carbide Micro poda
Kukanda uye Kuwedzeredza Green Reaction Yakasungwa Silicon ...
Bullet humbowo Sheet
silicon carbide inopenya chubhu uye kupisa exahanger
Rbsic (sisic) radiation machubhu ane hunhu hwakanyanya senge ngura kuramba, kukwirira tembiricha kushivirira, oxidation kusagadzikana, kwakanyanya kupisa kupisa, kukombama simba, hupenyu hwenguva yakareba sevhisi, nezvimwewo. yekugadzirwa kwemaindasitiri.
Iwo akateedzana emwaranzi machubhu anoshandiswa zvakanyanya mune annealing yekugadzira mitsara kwemaindasitiri esimbi nesimbi. Ivo anoshandiswawo kupisa kupisa conduction system uye inopenya system pasi pemamiriro ekushisa kwakanyanya, kukwirira ngura uye kwakakwirira kupfeka kuramba.
a. High tembiricha shiviriro
b. Yakakwirira ngura kuramba
c. Kwakanakisa abrasion kuramba
d. Yakakwana Thermal conductivity.
Zvimwe RBSiC / SiSiC maitiro akasungwa nesilicon carbide zvigadzirwa:
RBSiC (SiSiC) silicon carbide sic cyclone parts / cyclone lining with high hardnesshas high hardness, high tembiricha, abrasion resistance, oxidation resistance, acide uye alkali kuramba maitiro, ayo anoshandiswa zvakanyanya kupfeka-kuramba lining ye hydraulic cyclones, flue gasi desulphurization pombi uye marasha slurry anotakura mapaipi.
Ukobvu huripo: 4mm - 25mm
Chimiro chiripo: Tubes, Tee pombi, Elbows, Cones, Rings zvichingodaro.
Iwo makuru zvigadzirwa zve reaction bonded silicon carbide ceramics ndeaya: muchinjikwa matanda, ma roller, pombi yemhepo pombi, zvinopisa mabhure, thermocouple inodzivirira machubhu, tembiricha yekuyera zvikamu, zvinopenya machubhu, desulfurization nozzles, crucible, batts, pfeka nemishonga lining zvinhu, mahwendefa, zvisimbiso, mhete uye akasarudzika akaumbwa zvikamu zvakaumbwa.
1.Can iwe kupa mharidzo?
Ehe Tinoedza nepatinogona napo kuti tikupe iwo emahara sampuli.
2.How nezve yako Mushure-yekutengesa sevhisi?
Isu tinovimbisa kuti tinogona kuchinja zvigadzirwa kana kudzorera kana vaine chero dambudziko remhando.
3.When patinogona kutaura newe?
Iwe unogona kutibata nesu maawa makumi maviri nemaviri zuva rega rega.Tiri kufara kukushandira iwe chero nguva.
4.Unogona kundipa dhisikaundi?
Ehe, tinogona, kana iwe uine chero kubvunza, ndapota taura nesu kuburikidza neemail kana imwe nzira yekubatana. 5.What nezve MOQ yako?
6.Are iwe kutengesa kambani kana mugadziri?
Isu tiri fekitori uye mugadziri
7. Yako yakareba sei nguva yekuendesa?
Kazhinji iwo mazuva mashanu kusvika gumi kana zvinhu zviri mudura. kana mazuva gumi nemashanu kusvika makumi matatu kana nhumbi dzisipo, zviri maererano nehuwandu.
8.Iwe unopa sampuli here? zvakasununguka here kana zvimwe?
Hongu, tinogona kupa mharidzo mahara muripo.
Pashure: Nesilicon Carbide Cantilevers Paddle
Zvadaro: Bullet humbowo Sheet
Kukanda uye Kuwedzeredza Green Reaction Yakasungwa Sil ...
Pfeka Sleeve Tube